Vivo S1 Pro: Tilmaamaha, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah | Androidsis
Vivo S1 Pro: Qadka dhexe ee cusub oo leh kamarad dib looga noqon karo
Noocyo badan oo ku saabsan Android ayaa ku sharadaysan kamaradda lagala noqon karo taleefannadooda. Huawei dhawaan ayuu ka mid noqon doonaa. Mid ka mid ah noocyada adeegsanaya cunsurkan ayaa ah Vivo. Soo saaraha Shiinaha ayaa ilaa hada nooga tagay dhowr taleefoon oo wata kamarada noocan ah, sida tan S1 ama X27 kala duwan. Calaamadda ayaa hadda soo bandhigeysa Vivo S1 Pro, oo waliba leh cunsurkan.
Tani Vivo S1 Pro, sida aan ka heli karno, waa telefoon xoogaa ka awood badan kan S1 in sumaddu naga tagtay dhawr toddobaad ka hor. Naqshadeynta labada moodle ayaa lamid ah, in kastoo heer farsamo aan ka helno xoogaa kala duwanaansho u dhexeeya labada. Hadda, waxaan horeyba u ogaanay wax walba oo ku saabsan taleefankan.
Naqshadeynta taleefanka, oo ay ugu mahadcelineyso kamaraddan dib looga noqon karo, ayaa ah shaashad buuxda. Intaa waxaa dheer, waxaan ka heli kamarad gadaal seddex ah oo ku jirta, isagoo si cad u sheegaya in kamaradaha ay yihiin cunsur muhiim u ah qaybtan suuqan. Marka waxaa loo soo bandhigay ikhtiyaar wanaagsan qaybtan suuqan ah.
1 Vivo S1 Pro qeexitaannada
Vivo S1 Pro qeexitaannada
Tani Vivo S1 Pro waxay la timid dad badan walxaha aan hadda ku aragno bartamaha-dhexe ee Android. Shaashad ballaaran, marka lagu daro haysashada kaamirooyinka gadaal badan. Sidaa darteed, waxay u hoggaansameysaa dhinacyo badan oo dadka isticmaala ay ku qiimeeyaan qaybtan suuqa. Kuwani waa faahfaahinta taleefanka:
Screen: Super AMOLED 6,39 inji oo leh 2340 x 1080 xallin iyo saamiga 19,5: 9
Gacaliye: Qualcomm Snapdragon 675 AIE
Kaydinta Gudaha: 128/256 GB (oo lagu ballaarin karo microSD illaa 256 GB)
Cámara trasera: 48 MP oo leh fur f / 1.78 + 8 MP oo leh aperture f / 2.2 xagal balaaran + 5 MP oo leh aperture f / 2.4
Batariga: 3.700 mAh
Cabbirada: 157,25 x 74,71 x 8,21 mm
Kaamirooyinka ayaa suurtogal ah inay yihiin curiyaha ugu awoodda badan Vivo S1 Pro. Nooca Shiinaha ayaa ahmiyad gaar ah siiyay cunsurkan ku jira aaladda. Dhinaca hore hal shidma, kamaraddan isdaba-joogga ah, 32 MP. Kaamiro wanaagsan oo aad ku qaadatid sawirro iska qaadis ah waqti kasta. Inta gadaal ku jirta kamarad saddex-geesood ah, oo leh 48 MP shidma weyn. Intaa waxaa dheer, dhammaantood waxay ku shaqeynayaan sirdoon farsamo, si loo ogaado muuqaallada wanaagsan iyo waxqabadka wanaagsan guud ahaan.
Inta soo hartay ee qeexitaanku waxay si fiican ugu hoggaansamayaan waxa aan ka filayno qaddarkan. Shirkaddu waxay soo bandhigaysaa Snapdragon 675 oo ah processor-ka taleefanka. Waxay ku saabsan tahay Calaamadda cusub ee Qualcomm ee bartamaha-dhexe, kaas oo qaadaya markhaatiga Snapdragon 660. Waxay la timid laba isku-darka RAM iyo kaydinta. Halka aan ka helno batari leh awood dhan 3.700 Mah. Marka lagu daro processor-ka iyo jiritaanka Android Pie, oo leh shaqooyin kala duwan oo maareynta batteriga ah, waa inay siisaa dadka isticmaala madax-bannaanida wanaagsan. Xaaladdan oo kale, dareeraha faraha ayaa lagu dhex daray shaashadda hoosteeda, maaddaama aan ku aragno in badan oo ka badan suuqa.
Sida caadiga ah telefoonada astaanta, tan Vivo S1 Pro horey ayaa loogu soo bandhigay Shiinaha, halka ay suurtagal tahay in horey looga iibsado si rasmi ah. Illaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ku saabsan bilaabitaankeeda Yurub. Astaantu maaha mid ka mid ah kuwa ugu caansan Yurub, sidaa darteed waxay u badan tahay in taleefanka aan si rasmi ah loo furi doonin. Laakiin xaqiiqo ayaan kaa sugeynaa.
Taleefanka waxaa lagu furay labo midab: buluug iyo casaan, oo aan ka arki karno sawirka. Intaa waxaa dheer, waxaan ka heli laba nooc oo ka mid ah. Mid leh 6/256 GB midna leh 8/128 GB. Waxyaabaha qosolka leh ayaa ah in labada nooc ee Vivo S1 Pro ay ku yimaadaan qiimo isku mid ah. Waxaa lagu bilaabay qiimo dhan 2.698 yuan, taas oo ku saabsan 357 euro in la beddelo. Haddii laga bilaabo Yurub, waxay ku dambayn kartaa xoogaa ka qaalisan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Shiinaha Shiinaha » Vivo S1 Pro: Qadka dhexe ee cusub oo leh kamarad dib looga noqon karo
Shaandheeyey processor-ka Xiaomi Mi A3
Android Auto waxaa dib loo naqshadeeyay iyadoo lagu hagaajinayo barta hagista iyo ogeysiisyada